Ngeminyaka yoo-1980, amazwe amaninzi ehlabathini aqala ukusebenzisa iiprofayili zombhobho wentsimbi kulwakhiwo lwenqaba xa kuphuhliswa imigca yokuhambisa ye-UHV. Iinqaba zetyhubhu zensimbi ezinemibhobho yentsimbi njengoko eyona nto iphambili yavela. EJapan, iinqaba zetyhubhu zentsimbi ziphantse zasetyenziswa kwimigca ye-1000kV UHV nakwiinqaba. Banophando olunzulu kwitekhnoloji yoyilo lwezibonda zentsimbi.
Ukuzoba ngamava angaphandle, iiprofayili zepayipi zentsimbi zisetyenzisiwe kwi-500kV Double Circuit tower kunye nenqaba yesekethe ezine kwinqaba enye e-China, ebonisa ukusebenza kwayo kakuhle kunye nokuxhamla. Ngenxa yokuqina kwecandelo layo elikhulu, iimpawu zoxinzelelo olunqamlezileyo, uxinzelelo olulula, ukubonakala okuhle kunye nezinye izibonelelo ezibalaseleyo, ulwakhiwo lwetyhubhu yentsimbi yenziwe kakuhle kwimigca yamanqanaba ombane ahlukeneyo. Ngokukodwa, isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo olukhulu lwesakhiwo kunye nenqaba yesakhiwo samandla edolophu.
Ngophuhliso oluqhubekayo lweshishini le-metallurgical laseTshayina, ukuveliswa kwentsimbi ephezulu yomelele akusekho nzima. Umgangatho wentsimbi eyomeleleyo kumgangatho ophezulu e-China uphuculwe ngokukhawuleza nangokuzinzileyo, kwaye ijelo lonikezelo liye landa ngokugudileyo, elinika ithuba lokusebenzisa intsimbi ephezulu kumandla okuhambisa iinqaba. Kwiprojekthi yokuqala yophando ye-750 kV yokuhambisa umgca, iZiko loPhando lwaMandla oMbane lombutho wombuso lifundile ubumbano lwendibaniselwano, ixabiso loyilo lweparameter, iibholithi ezifanayo kunye nezibonelelo zoqoqosho eziza kufunyanwa ekusebenziseni isinyithi esomeleleyo. . Kucatshangelwa ukuba isinyithi esinamandla amakhulu sihlangabezene ngokupheleleyo neemeko zokusetyenziswa kwinqaba ukusuka kubuchwephesha kunye nokusetyenziswa, kwaye ukusetyenziswa kwesinyithi esomeleleyo kunokuncitshiswa Ubunzima benqaba yi-10% - 20%.
Egqithileyo Iinqaba zombane zentsimbi yombane - Qiangli
Ulwakhiwo Tube Steel, Inqaba kaMasipala yoNxibelelwano, Umbane weNsimbi yeNqaba yombane, Ulwakhiwo lweZakhiwo zentsimbi, Umbane we-Angle Steel Towers, I-Angle yentsimbi yokuThutha amandla eNqaba,